Lo’ lagu xabisay garaashyo ku yaalla Magaalada Muqdisho oo gaajo awgeed u bilaabay iney is-cunaan (Daawo Sawirro)!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Lo’ lagu xabisay garaashyo ku yaalla Magaalada Muqdisho oo gaajo awgeed u bilaabay iney is-cunaan (Daawo Sawirro)!!
Lo’ lagu xabisay garaashyo ku yaalla Magaalada Muqdisho oo gaajo awgeed u bilaabay iney is-cunaan (Daawo Sawirro)!!
Dhacdo naxdin iyo amakaag leh ayaa la soo sheegayaa in lagu arkay garaasahyo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho oo lagu xabisay Lo’ fara badan.
Lo’dan oo qiyaas ahaan gaareysa kun neef ayaa waxaa la sheegay in laga soo celiyey dalka boqortooyada Sacuudiga oo markii hore loo iib geeyey.
Koox isugu jiray weriyeyaal, siyaasiyiin iyo abwaano booqday xeradaas ayaa waxay sheegeen iney halkaas ku soo arkeen xaalad Murugo leh oo laga naxo.
“Intii aan joogney goobtii lagu xareeyay Lo’da waxay indhaheenu qabteen qaarkood oo Gaajo dartood isku cunaya, kuwo ay Naftu ka sii baxeyso iyo kuwo baqtiyay oo dhulka daadsan” ayuu yiri mid ka mid ah weriyeyaashii booqday garaashkaas.
Shirkad laga leeyahay dalka Masar oo lagu Magacaabo Naas-Galoob iyo Dad Soomaali ah oo la shaqeysa inay la sheegay halkaas ku xareeyeen lo’dan la macluuliyey oo lagaajeysiiyay.
Shiikh Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) oo ka mid ahaa dadkii ku soo baxay dhibaatada loo’dan loo geystay ayaa sheegay in uusan waligii arkin xoolo maxaabiis ah, isagoo madaxda dowlada ugu baaqay inay dabagal ku sameeyaan sababaha keenay dhacdadan foosha xun.
Lama oga illaa iyo hadda sababta ay ganacsatadii laheyd ay sidan ugu galeen lo’dan iyo ujeedada ay ka lahaayeen iyagoo xitaa haddii laga soo celiyey dalkii loo dhoofiyey awoodi karay iney ku iibiyaan suuqyada xoolaha bedelkii ay macluul iyo gaajo ku dili lahaayeen, taasoo ah arrin naxariis daro ah oo ka baxsan shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida.
waxaana loomalaynaa in ayarintaan ka danbeyso Wasiiro Dowlaha qaasatan Wasaarada Xoolaha Soomaaliya taas kusheegtay in labaaraayo kadibna ay iska aadeen hoteelada iyo Tumashadooda waa sida lagu yaqaano Wasiirada Jooga Muqdisho.
Previous PostDaawo Sawirro: Dhismaha Dabaq Dheer oo si layaab leh usoo dummay iyo Qasaaro badan oo ka dhashay!!! Next PostDAAWO Barnaamij Xiiso leh: Sidee loo soo celin karaa tayada & kala danbaynta Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ? (MUUQAAL)